SIDA LOO KARIYO MACAANKA MASRAXA - 10 QARSOODI - WARARKA
Sweeten inta lagu jiro xilliga qaboobaha ee sanadka waxay noqon kartaa macaanka weyn, waa arrin aad u fiican oo wacan leh cabitaan diiran ama rooti la dubay.
Inkastoo dad badani tixgeliyaan macaanka, dhab ahaantii waa saxan aad u casri ah. Tusaale ahaan, macaanka roodhida, sida caadiga ah, ayaa loo adeegsaday miiska boqortooyada.
Haddii aad haysato fursad aad ku kariso nooca ilaalinta noocan ah, waxaad haysataa fursad aad u wanaagsan oo aad u kala duwantahay mulkiilahaaga.
Kaliya raac talooyinka qaarkood si aad u samayso midhaha ugu fiican adigoo dhadhankaaga.
Xulashada habboon ee alaabta ceeriin ah
Marka hore, waa in aad go'aansataa qalabka cayriin, taas oo ah, miraha ama miraha aad rabto inaad isticmaasho.
Xeerka ugu weyn ee halkan waa: qaado alaabta ceeriin ah oo si siman u bislaaday, taas oo ah, midho kasta ama midho isku mid ah oo qaangaar ah.
La taliyayaal noocaan ah si loo helo si isku mid ah diyaargarowga.
Markaad ka fahantid magaca, macaanka ayaa la kariyey.
Sidaa darteed, haddii aad karisid walxo cayriin ah oo heerarka kala duwan ee qaangaadhka ah, markaa waxaad la kulantaa tiro aad u kala duwan. Beerta qaarkeed (tusaale ahaan) waxay noqon doontaa mid adag oo muuqaal ah, halka kuwa kale ay noqon doonaan Boorash dhamaystiran.
Dabcan, jimicsi khibrad leh, waxay macno u tahay isticmaalka saameyntaan. Tusaale ahaan, miro badani (tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inay jiraan miraha iyo xitaa khudaarta) inay noqdaan nooc asal ah, iyo kuwa aan qaangaarka aheyn oo si xiiso leh u soo jiidanaya dusha sare ee asalka leh faahfaahin adag oo yar.
Si kastaba ha ahaatee, ikhtiyaarkan waxay u baahan tahay faham qotodheer iyo xitaa dhadhanka farshaxanka, sidaas darteed waxa fiican in la qaato alaabta ceeriin ee qaangaarka isku midka ah.
Si doorashadan loo eego midabka iyo joogtaynta alaabta ceeriin ah. Qaado oo kaliya midabka midabka midabka leh ee midabka leh oo midabkiisu yar yahay iyo midhaha - waxay si buuxda u bisil yihiin.
Jidka, fiiri xajmiga, sababtoo ah waxay ku fiican tahay marka alaabta ceeriin ay leedahay cabbir isku mid ah, si ay u hadlaan, berry berry ah.
Si fiican u dhaq miro
Berry cagaaran waa la dhaawici karaa inta lagu jiro habka lagu dhaqo, sidaas awgeed waa in la daryeelaa.
Isticmaal xashiishad iyo biyo iftiin ah, waxaad qaadan kartaa, tusaale, qubeys.
Ka dib markaa, waxaad u baahan tahay in aad ka baxdid berry si aad u oggolaato biyaha in ay biyuhu daadiyaan oo ay qalajiyaan wax yar.
Haddii aan ka hadleyno waxyaabo badan oo cufan oo adag, ka dibna socodka sahlan ee biyo socodka ayaa sidoo kale ku haboon. Xitaa waad ka caawin kartaa gacmahaaga si aad u dhaqdo waxtar badan.
Ka hor intaadan bilaabin inaad maydho, mararka qaarkood waa lagama maarmaan in si taxadar leh loo xalliyo alaabta ceeriin ee la heli karo, si aad u nadiifiso bacalka iyo wasakhda.
Ugu horreyn, waa inaad ka saartaa dhowr khuraafaad oo horay loo soo arkay oo si firfircoon loo isticmaalay. Aan ku bilowno copper.
Waxaan si xoog leh kugula talineynaa inaadan isku karkarin weelka naxaasta.
Marka hore, miraha iyo berry ayaa burburin doona qiiqa bakooriyada, ugu dambeyntii waxaad ka heli doontaa patina on saxamada iyo copper ka mid ah macaanka laftiisa, iyo sidoo kale ion copper baabbi'iyo ascorbic acid, taas oo macnaheedu yahay in alaabta la helo iyada oo aan vitamin this.
Sida aad arki karto, birta sharaf leh, inkastoo ay weli faa'iido leedahay, ma aha doorka ugu fiican ee macaanka.
Waxaan sii wadnaa aluminium, taas oo aan sidoo kale loo baahnayn si macaanka. Arrintu mar kale ayay ku jirtaa oxides, laakiin hadda aluminium, taas oo lagu burburiyo ficilka miraha iyo berry asidiinta. Sidaa darteed, aluminium wuxuu ku jiraa macaankaaga, mana jirto wax si cad loo sameeyo.
Waa maxay xulashada ugu fiican - waxaad waydiisaneysaa. Doorashadani waa:
enamelware - laakiin aan lahayn chips;
suxuunta birta ah ee birta.
Su'aasha labaad ee muhiimka ah ee ku saabsan suxuunta waa xulashada awooda, halkaa waa in aad kugula talisaa lafil, taas oo ka fiican dhamaan dhinacyada.
Caatoobo oo ku saabsan karinta cuntada fudud ee aadka u fiican, waxay diirimaan si wanaagsan waxayna siinayaan lakab khafiif ah oo macaan, taasoo ugu dambeyntii noqoto mid cufan iyo labis.
Intaa ka sokow, si aad isugu qasto miskaha, waxaad u dhaqaajin kartaa suxuunta naftooda, iyo digsiga waxaad u baahan doontaa inaad kor u qaaddo wax natiijo ahna waa suurtagal in la waxyeeleeyo berry ama miraha.
Sidaa darteed, haddii aad dooratid suxuunta, qaado bir ah birta aan saliida lahayn ama basaas la dhalaalay oo leh hoos u eg. Kaliya ha qaadin qoto dheer.
Qofna lama burin sharciyadii
Xeerarka aasaasiga ah ee la raacayo, haddii dheef-shiid kiimiintu aysan si kale sheegaynin:
Saameyntooda - qiyaastii kiilo sonkor ah halkii kiilo oo ah walxo cayriin ah si ay macaanka u kaydiso oo aan la karinin;
marxaladaha - macaanka ayaa la kariyey ma karkarin keli, laakiin 2-3 karkaraya;
warqadda ama xayeysiinta - marka macaanka "nasashada", isticmaal canaan si aad u ilaaliso miraha ama miraha si aad u adag;
dabka - ka dib marka la kariyo ololka ayaa la yareeyaa si loo xakameeyo xumbada;
kaliya macaanka - ha cunin weelasha kale ee ku dhow, macaanka oo si firfircoon u nuugaya urta.
Raac talooyinkan adiguna waxaad heli doontaa macmacaanka ugu fiican.
Waxaa jira talooyin gaar ah oo ku habboon qalab cayriin gaar ah. Talooyinkani waa:
pre-karkariyo - quince, tufaax, pear u baahan tahay bilawga ah aan karkarin inta ka horeysa habka ugu muhiimsan;
khaanad madow - pre-cooked dhowr daqiiqo biyo karkaraya iyo habka wax lagu kariyo macaanka laftiisa ku dar additirta;
currant madow - pre-blanched biyo karkaraya 40-50 ilbidhiqsi;
khudaar - waxay u baahan tahay in hore loo qulqulo biyaha, halkaas oo ay ku daraan soodhada, halkii litir oo biyo ah, hal qaadasho iyo nus, qaad khudaar halkaas ah shan daqiiqo si ay u ilaaliso foomka;
tufaaxa - jarjaradii ugu horeeyay ee la gooyey dhowr daqiiqadood oo biyo ah, halkaas oo ay ku daraan laba qaado oo cusbo ah, ka dibna isla mudada isku mid ah ee biyaha karkarinaya, si aanay u madoobaan;
berry - Si aad uhesho qaabka, ujooga cadayga.
Doorashada habka karinta
Guud ahaan, waxaa jira laba siyaabood oo waaweyn: classic (dheer) iyo casri (gaaban). Qeybta caadiga ah, marka hore waxaad ku karkari kartaa sharoobada, ka dibna ku dar walxaha cayriin, ka dibna dhowr jeer oo wax lagu karsado iyo karkariyo. Manipulations waa muddo dheer oo shaqeynaya.
Qeybta casriga ah, marka hore waxaad ku shubtay walxo cayriin iyo sonkor ku jirta weel shan saacadood ah, ka dibna samee hal karinta. Dabadeedna, isla markiiba waxay dhigeen bangiyada.
Ma aha in la yiraahdo hababka qaarkood way ka fiican yihiin, waxay ku kala duwan yihiin maaha kaliya marxaladaha iyo tiknoolajiyada, laakiin sidoo kale dhadhan.
Jam aan la dhigi karin
Fursada ugu fudud: qaado qandhada iyo ka daadi macaanka diyaarinta. Haddii dheecaanku ku faafo, markaa waxaad u baahan tahay inaad kari karto, haddii dhibicdu ay sii jirto oo adkayso qaabka qaabka isgoyska, macaanka waa diyaar.
Intaa waxaa dheer, macaanka la dhammeeyaa wuxuu noqonayaa mid muuqaal ah oo daahfuran, maraqana wuxuu ku yaalaa meel u dhow xarunta dhexe ee lafaha miskaha ama naxaasta, haddii aadan raacin talooyinka hore.
Baakooyinka saxda ah
Si aad u hesho habka ugu wanaagsan ee bangiyada, waa inaad kaliya jiifisaa macaanka la qaboojiyey.
Haddii aan hore loo qaboojin, bangiyada waxay yeelan doonaan lakab kuwaas oo ka kooban sharoobada iyo sheyga ugu weyn ee laftiisa.
Intaa waxaa dheer, bangiyada uma baahna inay si deg deg ah u rogaansababtoo ah macmacaan diiran ayaa iska bixin kara fawaarta, taas oo markaa siinaysa kondens, taas oo ku jirta weelka ku jira dhibicda iyo caaryada ayaa laga arki karaa halkaa.
Marka la eego, bangiyada waa in marka hore la nadiifiyo, taasna waxaa jira siyaabo badan oo foornada u karkaraya.
Kaliya ka dib markii sterilization u baahan yahay si si taxadar leh u qalaji dhalooyinka.
Waa inaad ku karsatid macmacaanka aan ka badnayn hal sano iyo badh oo u adeegso inta badan kuleylaha wax ka badan laba litir.
Malaha, waad ogtahay, laakiin mar kale, kaydinta waa in lagu abaabulaa meel qabow, halkaasoo heerkulku aanu kordho 15 digrii Celsius.
Talooyinka la soo maray
Ugu dambeyntii, waxaan ku siin doonaa qaar ka mid ah talooyin qiime leh oo waqtiga-la-baaro ah. Tusaale ahaan, haddii uu macaanku bilaabay inuu gubo, waa suurtogal in la saxo saxada, haddii lagu shubo weel kale waana caadi in la dhammeeyo. Citric acid, kaas oo lagu daro qadar yar shan daqiiqo kahor dhammaadka karinta, ayaa kaa caawin doonta inaad saxartid macaanka.